Raysalwasaaraha Kenya oo La taliye u magacaabay Arrimaha Soomaalida • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Raysalwasaaraha Kenya oo La taliye u magacaabay Arrimaha Soomaalida
Raysalwasaaraha Kenya oo La taliye u magacaabay Arrimaha Soomaalida
Posted: Khalid Yusuf - December 23, 2012
Raysalwasaare Odinga oo shalay ka qeyb galay isu soo bax Xisbigiisa ku qabtay Fagaaraha Uhuru Park ee Nairobi
Raysalwasaaraha dalka Kenya Raila Odinga ayaa shaaciyey inuu magacaabay Lataliye khaas ah oo kala taliya xafiiskiisa arrimaha Soomaalida.
Qoraal kasoo baxay xafiiska Raysalwasaare Odinga ayaa lagu sheegay in Ibraahim Axmed Cabdirashiid loo magacaabay la taliyaha Raysalwasaaraha ee arrimaha Soomaalida. Waxaana qoraalkan lagu sheegay in La taliyaha uu u dhaxeyn doono xariirka ka dhaxeeya Xafiiska Raysalwasaaraha iyo dhanka Dowlada Soomaaliya.
Ibrahim oo ah nin muddo kasoo shaqeenayey hay’adaha samafalka ayaa sidoo kale xubin ka ah xisbiga Raysalwasaaraha ee ODM. Magacaabista mas’uulkan ayaa sidoo kale kusoo beegmaysa xili dalka Kenya uu ka bilowday olalaha doorashooyinka oo wadankaasi ka dhici doona bisha Maarso ee sanadka soo socda 2013.
Magacaabista La taliyaha Raysalwasaaraha ayaa imaaneysa xili wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Madaxweyne Dowlada Federaalka Soomaaliya oo uu booqasho ku joogo dalka Kenya.
Raysalwasaaraha dalka Kenya ayaa sheegay in xaaladaha dalka Soomaaliya ka jiray ay saameyn xoogan ku yeesheen dalka Kenya iyo guud ahaan gobalka, asagoo markaasi sheegay in si wadajir ah isaga kaashan doonaan dowlada Soomaaliya arrimahan.
Xukuumada Raysalwasaare Odinga ayaa dhawaan shaacisay in dib loo celinayo dadka Soomaalida ah ee qaxooti nimada ku jooga dalka Kenya, waxaana Soomaalida gudaha Kenya ku sugan loo sheegay kuwooda qaxootiga ah inay dhamaantood iska xaadiriyaan xeryaha qaxootiga ee ku yaal gobalka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya.
Soomaalida ku sugan Kenya oo halkaasi maalgashi xoogan kusameeyey sanadihii lasoo dhaafay, ayaa ayagu walaac ka muujiyey weerarada joogtada noqday ee kusoo badanayey xarunta Soomaalida ee caasimada Nairobi, xaafada Islii. Waxay sidoo kale ganacsatada iyo hogaamiyaasha Soomaalida Kenya ay si weyn u dhaliileen habka dowlada Kenya u abaartay xaaladaha soo cusboonaaday iyo waliba ciqaabta guud oo ay la beegsanayaan dadka Soomaalida ah ee qaxootinimada ku yimid dalka Kenya.
Arrimahan iyo waliba ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, ayaa waxay keenaysaa xaalad adag oo lasoo gudboonaatay dowlada Kenya iyo waliba dhanka Soomaalida oo ayagu hada aan isku fikir ka ahayn habkii loo abaari lahaa kooxaha mayilka adag ee gacan saarka laleh Kooxda Al Shabaab kuwaasi oo lagu tuhunsan yahay inay ka danbeeyaan weerarada ka dhacay gudaha Kenya.
Balse weerarada oo waagii hore ahaa kuwo lala beegsanayo xarumaha ciidamada Kenya iyo goobaha ay dadka Kenyaanka ku cibaadeystaan ayaa hada isu bedalay kuwo lagu soo koobay xaafada Soomaalida degto ee Islii, halkaasi oo weeraro bambaano lala beegsaday gaadiidka shacabka, Masaajido, Kaniisado iyo goobaha laga cunteeyo.